Samsung Galaxy J3 (2017) ၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုစစ်ထုတ်ထားတယ် Androidsis
၂၀၁၆ မှ Samsung Galaxy J3
Galaxy J စီးရီးဆိပ်ကမ်းများသည်ရောင်းအားလောက်မရောင်းနိုင်ပါ galaxy S Samsung မှထုတ်လုပ်သောကုမ္ပဏီဖြစ်သော်လည်းဥရောပနှင့်အာရှရှိစျေးကွက်များ၌သိသိသာသာရောင်းအားများဆက်လက်ရောင်းချနေပြီး၎င်းကိုထိုမော်ဒယ်လ်အသစ်များအတွက်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
မကြာသေးမီက၏ဓာတ်ပုံများ က galaxy J5 (2017) ယခု Galaxy J3 (2017) သတ်မှတ်ချက်များ Geekbench မှာလုပ်ခဲ့တဲ့အခြေခံစံနှုန်းတွေကနေတဆင့်။
Samsung Galaxy J3 (2017), နည်းပညာဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများ
Geekbench ရှိ Galaxy J3 အသစ်၏စွမ်းဆောင်ရည်စမ်းသပ်မှုအရ၊ မော်ဒယ်သစ်တွင်နံပါတ်ပါရှိသည် SM-J330 နှင့်၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများတစ် ဦး မှညွှန်ပြ low-end terminal ကို.
Galaxy J3 မှာပါဝင်လာမှာပါ Samsung Exynos 7570 ပရိုဆက်ဆာ1.4GHz အမြန်နှုန်းဖြင့် Core လေးခုပါရှိသည်။
အလားတူပဲဖုန်းအသစ်ကိုလည်းယူလာပါလိမ့်မယ် RAM 2GB, သိုလှောင်ရန်နေရာ 16GB နှင့်a5 x 1280 Pixel Resolution (720p) ဖြင့် ၅ လက်မမျက်နှာပြင်.
ကင်မရာများအရ Geekbench စာရင်းအရ ၂၀၁၇ Galaxy J3 တွင် 2017-megapixel ကင်မရာပါဝင်ပြီးရှေ့ဖက်တွင် selfies အတွက် 12-megapixel sensor ရှိသည်။
Geekbench ရှိ Galaxy J3 (2017) test
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ device ကိုသယ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ် Mali-T20 ဂရပ်ဖစ် နှင့် Android 7.0 Nougat လည်ပတ်ရေးစနစ် ထည်၏။
ဒီအကွာအဝေးရှိအခြားစက်ပစ္စည်းများအတွက်ယခုအချိန်အထိလူသိများသည့်တစ်ခုတည်းသောအရာကဖြစ်သည် Galaxy J5 (2017) တွင် 720p resolution ရှိသောမျက်နှာပြင်လည်းပါရှိသည်၄.၈ လက်မ၊ processor နှင့်အတူတူဖြစ်သည် Exynos 7870, Galaxy J3 ၏ SoC ထက်အနည်းငယ်ပိုအစွမ်းထက်သည်။
ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် Galaxy J Series အသစ်များစတင်ရောင်းချမည့်နေ့ရက်ကိုအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးသော်လည်းစံသတ်မှတ်ချက်များစွာထွက်ပေါ်လာသဖြင့် Galaxy J3 (2017) အသစ်ဖြစ်သော Galaxy J5 (2017) ကိုမတွေ့မချင်းကြာမြင့်စွာမကြာနိုင်သေးပါ။ နှင့် Galaxy J7 (2017) ကိုတရားဝင်ရရှိနိုင်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Samsung » Samsung Galaxy J3 (2017) ၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုစစ်ထုတ်ထားသည်